Geyllanka golaha ammaanka oo gaaraya geyigga Soomaaliya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Siyaasada Geyllanka golaha ammaanka oo gaaraya geyigga Soomaaliya
Geyllanka golaha ammaanka oo gaaraya geyigga Soomaaliya
Xubnaha golaha ammaanka ee Qaramadda Midoobay ayaa booqasho taariikhi ah ku yimid magaaladda Muqdisho si ay ugu kuur gellaan xaaladaha jira, waxayna ballan qaadeen sii wadida taarreeradda ay siyaan shacabka iyo dawladda federaalka si loo xaqiijiyo nabadgelyadda iyo kala danbeynta waddanka Soomaaliya.
Isaggoo warfidiyeenka kula hadlayay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho danjiraha Britain u fadhiya xarunta Qaramadda Midoobay, Mark Lyall Grant, oo imminkana haya hogaanka meertadda ah ee golahaasi ayaa yiri, “Waxaan aad ugu farax sanahay fursadaan aynu ku nimid Soomaaliya. Booqashaddeenu waxay hoosta kasii xarriiqeysaa ballan qaadka beesha caalamka ee ku wajahan Soomaaliya.”
“Xubnaha golaha ammaanku rajo weyn ayey ka qabaan in dawladda Soomaaliya si degdeg ah usoo dhisi doonto guddiga doorashooyinka madaxabannaan ee dalka, kaasoo qabyo tiris ku sameyn doona destuurka una diyaarin doona afti dadweyne wixii loo gaaro dhammaadka sanadka soo socda ee 2015, ugu danbeysna doorashooyin u dhacaan 2016-da,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa danjire Mark Grant.
Danjiruhu wuxuu kaloo sheegay in golaha ammaanku ay taageero diyaar ula yihiin shacabka iyo dawladda si buu yiri loo gaaro ujeedka la hiigsanayo, wuxuuna carabka ku adkeeyay in haweenka laga qeyb geliyo dhammaan heerarka kala duwan ee hanaanka siyaasadda Soomaaliya.
Wefdiggaasi, ayaa la kulmay madaxweynaha, ra’iisulwasaaraha, afhayeenka barlamaanka, xubno sare oo ka tirsan goleyaasha dawladda federaalka, masuuliyiinta Galmudug iyo Jubaland. Iyaggoo sidoo kale soo dhaweeyeen heshiisyadda siyaasaddeed ee maammullo kummeelgaarka ah loogu dhisayo Koofur galbeed Soomaaliya iyo goboladda dhexe ee Soomaaliya.
Dhanka kale, xubnaha golaha ammaanku waxay kulamo la qaateen hoggaanka sare ee UNSOM, AMISOM iyo shaqsiyaad ka socday bulshada rayidka.
Wefdigga golaha ammaanka Qaramadda Midoobay ee Soomaaliya soo gaaray waxaa xubno ka ahaa dalalka Argentina, Australia, Chad, Chile, China, France, Jordan, Lithuania, Luxembourg, Nigeria, South Korea, Russia, Rwanda, UK iyo USA. Waxaana si wadajir ah u hoggaaminayey danjireyaasha Britain iyo Nigeria, hase ahaatee, socdaalkooda ayaa lagu soo beegay xilli muddaan gaar ah u leh Soomaaliya oo isku diyaarineysa wajiggii labaad ee hawlgel ciidan oo ka dhan ah xarakada Shabaab.
Previous articleXasil la’aanta Xaabsade iyo Xagalotoosiye ee Somaliland
Next articleWarbaahinta Soomaaliya oo looga digay hurinta colaadaha